Ukubonwa koyilo | Amadoda aQinisekileyo
Ukubonakaliswa yindlela okanye ubuchule bokujonga ngaphakathi kuwe, Ukuzibona njengeyona njongo iphambili. Ingabonakala ingenakwenzeka okanye ingaqhelekanga, kodwa ngumkhuba lowo isebenza ngokulungileyo ngeendlela ezininzi zengqondo.
Ziqhelanise nomfanekiso-ngqondweni wakho ngendlela eyiyo, inokukunceda ngakumbi ukulungiselela obu bomi. Kwaye inyani yethu inxulumene neengcinga zethu. Kuya kufuneka sigcwalise iingqondo zethu ngezimvo ezintle kunye nemifanekiso ukuze ufumane oko sikufunayo.
1 Yintoni uboniso oluBonakalayo?
2 Uziqhelanisa njani nokubona?
3 Ngaba ukubonwa kuyafana nengcinga?
4 Ukubonwa kuyichaphazela njani ingqondo yethu?
Yintoni uboniso oluBonakalayo?
Iziqulatho ze Yiba nomfanekiso-ngqondweni wakho ubona iimeko obungathanda ukuba nazo, apho unokuyila kunye neprojekthi yekamva ukuze uphile ngcono ngoku. Imalunga nokucinga kunye cinga ezo meko zinokuba nzima kuwe, apho umlinganiswa ophambili akhoyo, kwaye uzame ukugxila kwindlela yokuphila nokusombulula le meko ngendlela efanelekileyo.
Ngale ndlela sibonakalisa ngolu hlobo lokuboniswa kunye noxinzelelo, umzuzu owufunayo. Kuya kufuneka ucinge ngamaxesha akhuthazayo kwaye unamandla ngokwaneleyo ube nakho ukuyiphinda le meko ngendlela efanelekileyo.
Le ndlela yokubonakalayo isebenza kakuhle kubantu abaneentloni, ngokurhoxa emsebenzini ukugcina ubudlelwane nabanye, okanye ukuziva usoyika ukuthetha esidlangalaleni. Unokuba nomfanekiso-ngqondweni wakho, uzibonisa imifanekiso apho uzibona uthetha khona, nokuba ungoyena mntu uphambili kunye nokusombulula le meko ngempumelelo, ewe Kuya kufuneka uwubone lo mzuzu uzolile kwaye ukhuselekile.
Uziqhelanisa njani nokubona?
Ukubonwa akukho malunga nokuphinda ubuye kwimeko naphina, okanye nangaliphi na ixesha. Kuya kufuneka usebenzise lo mkhuba Endaweni ethe cwaka, khululeka kwaye ngaphezulu kwako konke uphumle. Kuza kusondela kancinci kukucamngca, ngenxa yamandla oxinzelelo. Kuya kufuneka uvale amehlo akho kwaye uphumle ngothotho lokuphefumla kwaye uzame ukujonga lo mzuzu.
Kufuneka thintela naziphi na iingcinga ezixubekileyo kwingcinga ofuna ukuyenza kwakhona. Xa ufikelela usukelo lwakho, jonga ngeso lengqondo loo nkcukacha, kwaye uthelekelele izinto kunye nezinto ezinokuba yinxalenye yendawo. Ngelo xesha kufuneka yilinganise imeko kwaye ucinge ukuphinda uyenze loo ndawo.
Khawufane ucinge ngalo mzuzu ubunzulu: indlela oza kunxiba ngayo, iqondo lobushushu, ivumba, abantu kwaye uzame ukufumana ukuba yeyiphi imvakalelo evusa loo mzuzu kuwe. Kuya kufuneka uyonwabele loo mboniso ngekratshi, ulonwabo kunye nokwoneliseka.
Le yeyona njongo iphambili, apho umbono unokuba wehle okanye ulalanise, sele uziqeqeshela ukuyila ukuze isombululwe ngendlela eyonelisayo. Ukuba uwenza lo msebenzi, ubuncinci kabini ngemini, uya kubona ukuba ungawenza njani la mathuba makhulu kakhulu kuwe, ngokuqinisekileyo kuya kwenzeka ukuba inyani yakho iqala ukutshintsha.
Ngaba ukubonwa kuyafana nengcinga?
Ayifani. Ukubonakaliswa xa kwenziwe kakuhle, kugxila kuzo zonke iintlobo zeenkcukacha, iyinyani kwaye inesiqhamo ngakumbi. Ukucinga kukucinga ngomfanekiso ngokungathi ubukele imovie ngaphandle kweenkcukacha. Kodwa kuyinyani ukuba omabini la magama adityanisiwe, ukucinga kuyinxalenye yale ndlela, kodwa kufuneka isetyenziswe ngendlela esebenzayo neyoyisayo.
Ukuziqhelanisa, kuya kufuneka usebenzise umbono Ukucinga ngeenkcukacha ezincinci kunye nokuvumela izinto ezincinci ezilula. Ngale ndlela uqeqesha ngokuthe ngcembe ukugxila kwezo nkcukacha zibalaseleyo. Ezona ziganeko ziphindaphindayo nezibonwayo zihlala zizihlandlo eziphikisanayo kubomi bethu bemihla ngemihla, ukuba ungalwenza njani uvavanyo lokuqhuba, uye kudliwanondlebe lomsebenzi, usuku lokuqala, okanye iimbaleki eziqeqeshiweyo, apho baya kuya kwiingcali ukubenza basombulule iimeko ezikhuphisanayo nalapho kufuneka bakholelwe ukuba baya kuphumelela.
Ukubonwa kuyichaphazela njani ingqondo yethu?
Gcwalisa ukuqonda kwethu ngezimvo ezintle kunye nemifanekiso, iya kuba yindlela yokuqeqesha ingqondo yethu ukuze ibonwe ngokuchanekileyo, ngaphandle kokusenzakalisa. Olu hlobo lokuphindaphinda ukuba zithintelwe ziya kusikhokelela ekufumaneni indlela elungileyo.
Uhlobo lweengcinga lulinganiswa neenkolelo zomntu ngamnye. Ukuba awuyitshintshi indlela ocinga ngayo, ngokuqinisekileyo yonke into eyenzekayo kubomi bakho bemihla ngemihla, iyaphindwa. Ngale ndlela, ukuba ingqondo yakho iyonqena, iya kususa inkuthazo yakho yokuma uqinile.
Ke ngoko, ukubonwa kufuneka kwenzelwe ukulungelwa komntu, kodwa ngendlela enentlonipho. Abantu basebenzisana ngobulumko, kodwa kunye neziphumo ezinokuthi zizenzele izibonelelo. Kuya kufuneka uyazi indlela yokwahlula indlela yokuzingca yokwenza phambi kwabanye, ukuba sibona izinto njengobuntu bethu, ngekhe ubone imeko yokwenyani.
Yiyo loo nto Ukuthobeka kufuneka kubekhona ngaphakathi kuloo mntu kwaye ungabhidaniswa nokuzincama. Kufuneka sizame ukugcwalisa indawo yethu yengqondo ngeenyani, iziqinisekiso kunye nemibono elungileyo kwaye ngaphezulu kwako konke kungqinelane noko sifuna ukukufumana. Lo mkhuba ngokuhamba kwexesha izakusinceda siphumeze imiboniso esifuna ukuyimela kwaye ke ziyilelwe kwaye zenziwa ukuba zibe semthethweni imini yonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukubonakala koyilo